Tababare Carlo Ancelotti oo aan Magaalada London maanta ula safri doonin kooxdiisa Real Madrid – Gool FM
Haaruun April 5, 2022
(Madrid) 05 Abriil 2022. Tababare Carlo Ancelotti ayaanan la safri doonin maanta safkiisa Real Madrid ee ku wajahan Magaalada London ka hor kulankooda habeen dambe ee ay la leeyihiin Chelsea.
Real Madrid ayaa heli doonin Macallinkeeda Carlo Ancelotti kulankooda Champions League oo ay habeen dambe la dheeli doonaan Chelsea, kaddib markii la wariyey inuusan maanta safkiisa Los Blancos u raacin Magaalada London.
Macallinkii hore ee Blues ayaa todobaadkii la soo dhaafay laga helay KOOFID 19, wiilkiisa ahna caawiyihiisa Davide ayaa kooxda hoggaaminayey kulankii Sabtidii ay guusha 2-1 ah kaga gaareen Celta Vigo ee ka tirsanayd horyaalka La Liga.
Laakiin, wararka laga helayo Spain ayaa sheegaya in Carlo uusan xiddigaha kooxdiisa Real Madrid la safrin, taas beddelkeeda waxa uu mari doonaa baaritaan kale oo PCR ah, iyadoo haddii laga waayo xanuunka uu kooxdiisa dib uga biiri doono ka hor ciyaarta.
Wasiirka ciyaaraha Masar oo Mohamed Salah kala taliyey go’aanka mustaqbalkiisa Kooxda Liverpool
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Benfica iyo Liverpool ee tartanka Champions League oo la shaaciyey